बुधबार, ३१ असार २०७७, ०९ : ३७
​ भनिन्छ, कृष्ण विद्धान मात्र थिएनन् कलाको धनी पनि थिए । बाँसुरी बजाएरै मन्त्रमुग्ध पार्ने कला उनीसँग थियो र त पछि लाग्थे १६ सय गोपीनी । ... ...
​ टेलिभिजनलाई पछि पार्दै युट्युब अहिलेसम्म भिडियो हेर्ने लोकप्रिय माध्यम बनिरहेको छ । १ अर्ब ५७ करोड प्रयोगकर्ता भएको युट्युबका लागि मानिसले दैनिक एक अर्ब घण्टा समय खर्चन्छन् । करिब ५० करोड मानिसले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिरहेका छन् । ... ...
​ बिम्सटेक सम्मेलन चार वर्षको फरकमा हुने गर्छ । पहिलो सम्मेलन थाइल्याण्डमा सन् २००४, दोश्रो भारतमा सन् २००८, तेश्रो म्यानमारमा सन् २०१४ र चौथो सम्मेलन सन् २००१८ नेपालमा हुन लागेको हो । ... ...
रीस किन उठ्छ?
​ रीसको समाधान सम्भव छ । हिप्नोथेरापी विधिद्वारा तपाईँको अवचेतन मनमा रहेका तपाईँलाई उत्तेजित पार्ने कारणहरू पत्ता लगाई तिनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । ... ...
कचेरा किन लाग्छ?
​ मानिस जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै मुख धुन्छ । दैनिक नित्य कर्मको रुपमा बाल्यकालदेखि नै उसलाई मुखु धुनु सिकाईएको हुन्छ । तर, मुख धुने भनिएपनि उसले सबैभन्दा बढी पानी आँखा पखाल्नमा खर्चन्छ । कारण हो, कचेरा । ... ...